Uzo Spool Of Pla
3d Printer filament (Fluorescent odo)
3d Printer filament (Purple red)
Cixi lanbo ebi akwụkwọ onunu Co., Ltd.was ike 2011and emi odude ke CIXI, Ningbo, Zhejiang,
ekpori adaba njem ohere na a mara mma gburugburu ebe obibi.
Anyị ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ndị 2000square mita na nwere 100 ọrụ.
Bụ 3D ebipụta mkpụrụ obi? Were ị ...
Ọtụtụ ndị na ntị ka 3D obibi, nke mbụ niile, dọọrọ mmasị mara mma obere ihe e biri ebi site 3D. Ọzọkwa, ụfọdụ ndị enyi ga na-eche banyere arụmọrụ nke dị iche iche ụdị nke 3D na-ebi akwụkwọ, na 3D-ebi akwụkwọ ihe e leghaara anya ọtụtụ mgbe. N'eziokwu, 3D ebi akwụkwọ ihe nwere ike ...
Mara PLA ihe nke 3D biri ebi mater ...
Ọtụtụ ahịa na ndị enyi na-ajụ m ma ọ bụrụ na PLA bụ plastic? Ebe a bụ a ike ike ikwu banyere ihe bụ PLA taa. PLA bụ English afo nke polylactic acid, nke e dere dị ka: polylacticacid. Polylactic acid (PLA) bụ a akwụkwọ biobased na ere ure ihe mere si starch ngwaọrụ chọrọ ...
Bụ n'ebe ọ bụla nchekwa na 3D biri ebi ele ...
3D-ebi akwụkwọ technology dabeere a digital nlereanya, iji a bondable ihe onwunwe dị ka powdered metal ma ọ bụ plastic na-ebipụta na Ọdịdị nke ihe oyi akwa site na oyi akwa. Nke a technology nwere ngwa ke ubi nke ọla, akpụkpọ ụkwụ, ulo oru imewe, ewu, engineering na-ewu ụlọ, ...